July 19, 2020 1126
पर्साको ठोरीमा भारतीय एसए’सवीले नेपाली भूमी मि’चेर संरचना निर्माण गर्न लागे’पछि स्थानिय बासीन्दो प्र’तिकार गरेका छन् । हतियार सहित नेपाली भूमीमा प्रवेश गरेका भारतीय एसएस’वीलाई स्थानियले प्र’तिकार गरेका हुन् ।
ठोरीको सिमाना नजिक नेपाली भूमीमा भार’तीय एसएसवीले टहरो निर्माण गर्न लागे’पछि स्थानियले विरोध जनाएका थिए । सो क्रम’मा झ’ड’पको अवस्था समेत भएको छ । भारतीयले नेपाली भूमीमै आएर छाप्रो बनाउन लागेपछि पुगे’का स्थानियले वि’रोध गरेका थिए ।
अवस्था विग्रन लागेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिध र शसस्त्र प्रहरीको टोली समेत पुगे’को थियो । जनप्रतिनिधिले स्थानिय’बासीन्दालाई आ’क्रो’शित नहुन भन्दै सम्झाएका थिए ।
स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले आवेशमा नआउन भन्दै नेपालीलाई सम्झा’इरहेको भिडि’योमा देख्न सकिन्छ । यो समाचार संग सम्बन्धित भिडियो तल छ ।
अर्को पनि सीमासम्बन्धी समाचार
पर्साको ठोरी गाँउपालिका– २ स्थित सुमेरु पहाडमा शनिवार साँझ उखेलेर फालेको नेपाल भारत सीमास्तम्भ पुनः यथास्थानमा लगाइएको छ । दिउसो १२ वजे सम्म यथास्था’नमा रहको सि’मा पिलर साँझ भने फालिएको अवस्था’मा फेला परेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ठोरी गाँउपालिका’का जनप्रतिनिधीलगाएत भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको उपस्थितिमा गएराति ९ बजे सीमास्तम्भ पुन यथास्थानमा लगाइएको हो ।
४३६ नम्बरको पिल्लर भारतीय क्षेत्रमा अल’पत्र अवस्थामा फेला परेको थियो । सिमास्तम्भ रहेको भन्दा ५ मिटर भारत तर्फको जमिनमा अलपत्र परेको सिमा स्तम्भला’ई यथास्थानमा लगाइएको प्रह’रीले जनाएको छ ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्म ठोरीमा भएका अभिव्यक्ति दिए एकाएक सो क्षेत्र चर्चामा आएको छ । स्थानियले खुसी हुँदा संरक्षणमा जुटेका छन् भने राम सिता:को मन्दिर रहेका स्थानमा पुजा सुरु गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेपछि भारत’मा भने विरोध भएको छ । प्रधान’मन्त्रीकै अभिब्यक्तिका कारण भगवान रामको जन्मस्थानलाई आफ्नो जमिनमा पर्ने देखाउन भारतीय सुरक्षाकर्मीले सि&मा स्तम्भ उखलेको हुनसस्ने स्थानियले जनाएका छन् ।
यस्तै, ठोरीवासीले भने त्यहाँ उत्खनन हुनुपर्ने जनाउँदै धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
माथिको समाचार संग सम्बन्धित भीडियो हेर्नुहोस….
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस् संपूर्ण विवरणसहित
Nextभोलि साउन ५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
दुर्गेश थापाले किन लुकाए श्रीमती? छोरा जन्मिएपछि आँखा-भरि आँशु पार्दै खोले वास्तविकता (भिडियो)
मास्क किन नलगाएको? भनेर सो’ध्दा महिलाले दिएको यस्तो जवाफले प्रह`री बने च’कित